DHAGEYSO Madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay khilaafka ka dhexeeya madaxda mamaulkaasi. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay khilaafka ka dhexeeya madaxda mamaulkaasi.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed ducaalle Geelle (Xaaf) oo ilaa bishii hore ee July ku sugaan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay deegaanada Galmudug wuxuuna ka warbixiyay arimo dhowr ah oo ay ka mid tahay khilaafka wali ka dhex jira madaxda ugu saraysa maamulka Galmudug.
Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in wali khilaafkii uu ka dhex taagan yahay madaxda Galmudug dowlada Soomaaliyana aysan ku guulaysan inay xaliso waxyaabaha la isku amri la’aa wallow uu madxweyne farmaajo dadaal badan arintaasi ku bixiyay.
Sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ku dhaliilay inaysan mamaulkiisa soo gaarsiin deeqaha loogu tala galay isagoo shacabka deegaanada Galmudug ugu baaqay inay isku tashadaan sidoo kalena ay hormar gaarsiiyaan deegaanadooda.
Khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu saraysa Maamulka Galmdug ayaa in muddo ah soo jiitamaayay,walina waxaa muuqata inaan xal kama danbays ah laga gaarin.
Madaxda Galmudug ayaa labo dhinac uu kala jabay kadib markii la isku daray maamulkii Ahlusuna oo horay uga arimin jiray qaar ka mid ah gobolada bartamaha iyo maamulkii hore ee Galmudug oo xaruntiisu ahayd magaalada Cadaado.
← DHAGEYSO Amniga xunta baarlamaanka Soomaaliya oo laga hadlayo.
Somalia forced evictions in significant rise – charity →